Indlu eNtofontofo kwihlathi lethu labucala elinamachibi! - I-Airbnb
Indlu eNtofontofo kwihlathi lethu labucala elinamachibi!
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAndres
Indlu ibekwe kwindawo yangasese, ijikelezwe yihlathi le-eucalyptus, ukuphuma kwangasese ukuya echibini kunye nelizwe elihle le-Andes. Sinegumbi lokutyela, igumbi lemidlalo, itshimini, indawo yokosa inyama kunye nehektare yonke yehlathi apho iillama neealpaca zihlala khona.
Sinikezela ngamagumbi okulala aphindwe kabini, amathathu kunye naqhelekileyo axhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi okuhlambela abucala aneshawa ezishushu kunye nezinto eziluncedo.
Ukuvuka kunye neengoma zeentaka, le ndawo ilindele isidlo sakusasa esenziwe ngumntu siqu. Isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa ivenkile yokutyela ibonelela ngeMenu ekhethekileyo yaseBolivia.
Indlu ye-ecological apho sahlula khona inkunkuma kwaye siphephe ukusetyenziswa kweeplastiki ezisetyenziselwa enye.
#Ecology #uxolo #Ukuzola #indalo #ukutya #gourmet
Ihlathi le-Eucalyptus kwiChibi laseTiticaca, indawo epholileyo nenoxolo, efanelekile ukuba uphumle kwaye uzalise amandla akho eith, ukwabelana nabahlobo kwaye ukonwabele indalo. Iimitha ezingama-200 ukusuka kwindlu kukho imarike yendawo, iplaza, iziko lezonyango kunye neevenkile.
Iyafumaneka ngoncedo 24/7